Igwe eji eme syringe China emeju (gụnyere ọgwụ mgbochi) ndị na -emepụta ya na ndị na -ebubata ya IVEN
Line Production Syringe emejuputara - PFS
Sirinji emejuola bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa ọgwụ ọhụrụ mepụtara na 1990s. Mgbe ihe karịrị afọ iri atọ gbasara mgbasa ozi na ojiji, ọ rụọla ọrụ dị mma n'ịgbasa mgbasa nke ọrịa na -efe efe na mmepe ọgwụgwọ. A na-ejikarị sirinji emejuru emeju maka ịkwakọba na ịchekwa ọgwụ dị elu ma a na-ejikwa ya ozugbo maka ntụtụ ma ọ bụ ịwa ahụ anya, otology, orthopedics, wdg.
Kedu ihe bụ sirinji ejupụtara?
Ka ọ dị ugbu a, ejirila ọgbọ mbụ nke sirinji iko niile eme ihe. A na -eji ọgbọ nke abụọ disposable sterịịịịkị plastik n'ụwa niile. Agbanyeghị na ọ nwere uru dị ọnụ ala yana iji ya eme ihe, ọ nwekwara ntụpọ nke ya, dịka nguzogide acid na alkali, imegharị ihe na mmetọ gburugburu ebe obibi. Ya mere, mba na mpaghara mepere emepe ejirila nwayọọ nwayọọ kwalite iji ọgbọ sirinji juru eju. Ụdị sirinji na -ejuputa ihe nwere ọrụ nke ịchekwa ọgwụ na ịgba nkịtị n'otu oge, ma na -eji ihe ndị ahụ arụ ọrụ nke ọma na nkwụsi ike. Ọ bụghị naanị nchekwa na ntụkwasị obi, kamakwa ọ na -ebelata ọrụ na ọnụ ahịa site na imepụta iji ruo oke ma e jiri ya tụnyere "karama ọgwụ + sirinji" ọdịnala, nke na -ewetara ụlọ ọrụ ọgwụ na iji ọgwụ arụ ọrụ ọtụtụ uru. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ nakweere ma tinye n'ọrụ na usoro ọgwụgwọ. N'ime afọ ole na ole sochirinụ, ọ ga -abụ ụzọ nkwakọ ngwaahịa ọgwụ, wee jiri nwayọ dochie ọnọdụ sirinji nkịtị.
Kedu ihe bụ njiri mara sirinji emejupụtara?
Dị ka ụdị nkwakọ ngwaahịa ọgwụ ọhụrụ, a na -eji sirinji ejupụtara na:
(1) Iji iko dị elu na ihe rọba, nke nwere ndakọrịta nke ọma na ọgwụ ike ma nwee ike hụ na nkwụsi ike nke ọgwụ ndị agbakọtara;
(2) Mbelata mkpofu nke mgbasa ozi ọgwụ na -ebute n'oge nchekwa na mbufe, ọkachasị maka nkwadebe ihe ndị dị ndụ dị ndụ;
(3) Izere mmịpụta ugboro ugboro mgbe ejiri ihe ndị na -egbu egbu mee ihe ma belata ohere nke mmetọ nke abụọ;
(4) Iji igwe ndochi mejupụta mmiri mmiri nke ukwuu, nke ziri ezi karịa mmịpụta ntuziaka nke ndị ọrụ ahụike;
(5) Igosipụta aha ọgwụ ahụ ozugbo na akpa ntụtụ, nke adịghị mfe ịme ụlọ ọgwụ; Ọ bụrụ na akara ahụ dị mfe iwepụ, ọ na -enye aka ịchekwa ozi gbasara iji ọgwụ eme ihe na ndị ọrịa.
(6) Ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma chekwaa ọkara oge n'ụlọ ọgwụ karịa iji ampoules, nke dabara adaba maka ndị ọrịa mberede.
Kedu ụdị ngwa nke Syringe emechiri emechi?
(1) iji ogbugba: wepụta sirinji a na -emejupụta nke ụlọ ọrụ ọgwụ na -eweta, wepụ nkwakọ ngwaahịa ahụ ma gbanye ozugbo. Usoro ịgba ntụtụ bụ otu nke sirinji nkịtị.
(2) Mgbe mwepụsịrị ihe nkwakọ ngwaahịa ahụ, etinyere agịga dabara adaba na isi cone, na ịsa ahụ na arụ ọrụ ịwa ahụ nwere ike rụọ ya.
Enwere ụdị igwe sirinji ejupụtara dị iche iche sitere na IVEN Pharmatech, igwe sirinji ejupụtara nke usoro mmepụta na ike gosipụtara.
Enyerela nri sirinji tupu emejue ya site n'ụzọ akpaka na ụzọ ntuziaka.
Mgbe etinyere sirinji ejujuru n'ime igwe, ọ na -ejuputa ma kaa akara, mgbe ahụ, a ga -enyochakwa sirinji ahụ emejupụrụ wee kpọọ ya na ntanetị, nke a na -esochi nkwanye akpaaka. Ruo ugbu a, enwere ike ibunye sirinji ejupụtara na sterilization na igwe mbukota ọnya na igwe katọn maka ịkwakọba ọzọ.
Ikike izizi nke sirinji ejujuru bụ 300pcs/hr na 3000pcs/hr.
Igwe sirinji ejujuru nwere ike iwepụta mpịakọta sirinji dị ka 0.5ml/1ml/2ml/3ml/5ml/10ml/20ml wdg.
Okwu mmalite nke uru ngwaahịa
Igwe sirinji ejujuru ejujuru na sirinji ndị a kapịrị ọnụ, yana ngwaahịa niile ahaziri iche. A kwadebere ya na okporo ụzọ kwụ ọtọ kwụ ọtọ nke Germany na enweghị mmezi. Ejiri ụgbọ mmiri servo abụọ nke Japan mere YASUKAWA.
Nkwụnye agụụ, na -ezere irighiri irighiri ihe site na esemokwu ma ọ bụrụ na ejiri vibrator maka ndị na -akwụsị rọba. Enwere ike idozi agụụ na ụzọ enweghị ike.
Mbipụta nke usoro, echekwara data mbụ.
Akụkụ akụkụ kọntaktị niile bụ AISI 316L na roba silicon roba.
Ihuenyo mmetụ aka na -egosipụta ọnọdụ ọrụ niile gụnyere mgbali agụụ oge, nrụgide nitrogen, nrụgide ikuku, ọtụtụ asụsụ dị.
AISI 316L ma ọ bụ nkenke dị elu seramiiki pistion na -ebugharị ya na motọ servo. Naanị melite na ihuenyo mmetụ maka mgbazi ziri ezi akpaka. Enwere ike idozi mgbapụta piston ọ bụla na -enweghị ngwa ọrụ ọ bụla.
Na -ejuputa Mpịakọta 0.5ml, 1ml, 1-3ml, 5ml, 10ml, 20ml
Onu ogugu isi 10 Tọrọ
Ikike 2,400-6,00 ntụtụ/elekere
Anya njem Ogologo 300mm
Nitrogen ihe 1Kg/cm2, 0.1m3/min 0.25
Mwepụ ikuku 6kg/cm2, 0.15m3/min
Ịnye ọkụ 3P 380V/220V 50-60Hz 3.5KW
Akụkụ 1400 (L) x1000 (W) x2200mm (H)
Nke gara aga: Glass Bottle IV Ngwọta Ngwọta Nweta
Osote: 30ml karama karama karama na -ejuputa na igwe ịcha akwa maka ọgwụ
Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe eji emejuola agịga, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Led,